Maxaad Ka Baran Laheyd Sida Instagram U Shaqeyso Instagram ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxa ay tahay inaad ogaato sida Instagram u shaqeyso
July 8, 2019 0 comments 797
Miyaad ka shakisan tahay sida Instagram u shaqeyso? Ha walwelin, sababtoo ah waxaan kuu diyaarinay hagidan adiga. Waxaan kuugu sharixi doonaa hab sahlan oo talaabo talaabo ah waxkastoo aad ubaahantahay inaad ka ogaatid shabakadan bulshada.
Instagram waa shabakad bulsho oo waqtigan xaadirka ah moodada ah isla markaana leh kobac aad u sareeya sannadihii ugu dambeeyay. Waxay leedahay in kabadan 400 milyan oo isticmaale. Markaa hadaad rabto inaad ka mid noqoto, ka dib waxaan kuu sheegayaa sida loo sameeyo iyo sida ay u shaqayso.
Waa maxay Instagram?
Kahor intaanan kuu sharraxin sida shabakaddan caanka ah bulshada u shaqeyso, waan kuu sheegi doonaa Waa maxay Instagram? Waa codsi meesha aad kula wadaagi karto sawirrada iyo fiidyowyada, iyo sidoo kale faallooyinka iyo farriimaha tooska ah.
Kaliya maaha mid kuu ogolaaneysa inaad ku muujiso maalin maalmeedkaaga sawirada, laakiin waxaad sidoo kale dhexgali kartaa saaxiibtinimada waxaadna dhex gashaa dadka cusub. Sidaa darteed, waa in shabakaddan bulshada ay kugula taliso inaad raacdo isticmaaleyaasha aan aqoon laakiin leh dhadhan isku mid ah.
Hawlgalkeedu waa mid aad u fudud oo fudud. Kaliya waa inaad furataa koonto oo aad isticmaasho aaladaha kala duwan ee uu soo bandhigo dalabka.
Samee koontada Instagram
Hadaad rabto inaad ogaato sida loo abuuro koontadaada 'instagram' Waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda:
Ku soo degso barnaamijka 'Instagram' moobiilkaaga
Ka dib markaad soo dejiso, waxaad furaysaa arjiga oo aad iska diiwaangelisaa emaylkaaga ama lambarka taleefankaaga oo aad samaysaa furaha sirta ah
App-ka ayaa ku weydiin doona inaad raadiso xiriiradaada, markii aad aqbasho, waxay raadin doontaa xiriirada leh akoon. Waxaad go aansan doontaa inaad rabto inaad raacdid iyaga iyo haddii kale.
Kusoo qaado sawirkaaga koowaad, kaasoo noqon doona astaantaada asxaabtaadana ku aqoonsan karaan.
Xulo haddii aad rabto astaan ​​gaar ah ama mid dadweyne
Bilow inaad aragto sida arjigu u shaqeeyo, sida loo arko sawirrada asxaabtaada oo aad faallo uga bixiso
Bayoolajiga Instagram wuxuu ku yaal meesha ugu sareysa astaantaada, waana waxa ugu horreeya ee uu adeegsaduhu arki doono marka uu soo galayo astaantaada. Sidee tahay warqad ku dabool Waxaa lagu taliyaa in si wanaagsan loo dhammeeyo, oo si wanaagsan loo ilaaliyo oo ay soo jiidato indhaha.
Laakiin Sideed u samayn kartaa?
Dhig sawir guud oo muuqaal ah oo aan fiicnayn oo tayo leh.
Adeegso mid gaaban oo fudud si aad u xasuusato magaca isticmaale.
Tilmaantaasna way ku wanaagsan tahay inaad geliso cidda aad tahay, waxaad qabato iyo waxyaabo kale oo ay tahay inay kuwaad raacdani inay adiga kaa ogaadaan
Si aad noolahaaga uga dhigto mid sii jiidasho leh waxaad ku dari kartaa xashiishad ama emojis
Waxa kale oo aad ku dari kartaa websaydhkaaga, bartaada, shabakad kale oo bulsheed ama kanaalka YouTube-ka ah.
Kusoo dhexbiir sawir ama muuqaal fiidiyoow ah barta Instagram
Si aad sawir ugu soo geliso barta 'Instagram', waa inaad marka hore gujisaa calaamadda "+" oo ku taal salka iyo bartamaha shaashadda
Ka dib sawirrada iyo fiidiyowga aad ku haysatid sawirkaaga moobiilka ayaa soo muuqan doona ama mid toos ayaad u sameyn kartaa
Markii aad sawireyso sawirka waxaad ku qori kartaa shaandhayn, waxaad beertaa, waxaad wax ka beddeshaa iftiinka, hooska, iyo kuwa kale.
Markaad siiso xigta, waxaad heleysaa ikhtiyaar inaad dhajiso faallo, aad magacowdo saaxiibbada aad rabto oo aad ku wadaagto shabakadaha kale ee bulshada.
Markaad dhameysato, waxaad siineysaa ikhtiyaarka "Boosto" iyo voila, waxaad ku daabacday sawirkaagii ugu horreeyay barta Instagram.
Maaddaama Instagram ay tahay dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo muuqaal ah, waa muhiim dhaji sawirro iyo fiidiyowyo wanaagsan. Ka fogow sawirada isku-dhejiska ah ee aan si fiican loo soo qaadan oo si xun loo sifeeyay. Hawlaha guud ama waxyaabaha aad jeceshahay, taasi waa, haddii aadan jeclayn, ha la wadaagin.
La macaamil dadka kale
Instagram waa shabakad bulsho oo lagu garto maalin walba is dhexgalka iyo isdhaxgalka dadka isticmaala. Boostada waxaad ku arki doontaa inay jiraan badhamo. Midkood waa sida ama waa sida. Waa wadne cad oo leh xuduudo cawlan, oo markii la cadaadiyo la galiyo casaan.
Waxaad kaloo wadnaha dhigi kartaa gaduud adigoo laba jeer ku siinaya sawirka. Waa hab aad u caadi ah oo lagu sameeyo.
Mid kale oo ka mid ah badhamadu waa daruur yar oo wadahadal ah, taas oo loogu talagalay faallooyinka. Halkaas waxaad ku qori kartaa wax kasta oo aad rabto oo ka mid ah daabacaad aad jeceshahay ama aad u soo jeediso.
Hadaad rabto inaad ka jawaabto, u sheeg ama si toos ah warqad ugu qor qof waad sameyn kartaa adoo ku meelaynaya arroba (@) oo ku xigta magaca adeegsadaha. Qaabkaan, ogeysiinta ayaa si toos ah ugu imaan doonta qofka aad sheegtey.
Astaanta hashtag (#) ama waxa loo yaqaan pad ayaa loo isticmaalaa in lagu calaamadeeyo daabacaadahayada. Haddii aad xirto aashitada, waxaad si otomaatig ah u heli doontaa dhejimaha lagu calaamadiyey Hashtag.
Mid ka mid ah xulashooyinka ay shabakaddan bulshada leedahay ayaa ah inaad raaci karto xashiish sida haddii ay tahay astaan ​​guud. Dareenkaas, hashtag waa mid aad muhiim ugu ah barta Instagram.
Instagram waxay kuu oggolaaneysaa inaad dhigto illaa xNUMX hashtags, laakiin taasi micnaheedu maahan inaad ka badin karto. Waxaa lagu talinayaa qiyaas ahaan toban ama shan iyo tobankiiba daabacan.
Mid ka mid ah qalabka hadda moodada moodada waa sheekooyin ama sheekooyin. Waad daabacan kartaa labadaba sawirro iyo fiidiyowyo maalinaada ah. Sidoo kale ku dar sawirro, dhejisyo iyo emojis, haddii aad rabto waa inaad qurxiso sheekooyinkaaga.
Daabacaadahaani waxay leeyihiin muddo ah saacadaha 24. Hawshani waxay kuu oggolaaneysaa inaad la wadaagto daqiiqadahaaga qaaska ah kuwa raacsan oo aad ku xafidid astaantaada muddadaas waqtigaas. Markaad dhigeyso sawirada ama fiidiyowyada, waxay u muuqan doonaan sida taxanaha filim ee sheekadaada.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka sheekooyinka ayaa ah inaadan ka walwalin doonin daabacaadda qaddarka aad rabto. Isku soo wada duuboo, waad wadaagi kartaa waxkasta oo aad rabto inta lagu gudajiro saacadahaas '24' oo waxaad dhigtaa hal-abuurnimo intii aad rabto. LSheekooyinka ayaa waliba ku siinaya ikhtiyaarka saamaynta, ku dar marooyinka ka mid ah waxyaabaha kale ee jeedinta leh.
Ku dhajiyay Instagram
Farriimaha Instagram sidoo kale loo yaqaan DM (farriin toos ah) waxay kuu oggolaaneysaa inaad wadahadal la yeelato qof raacsan ama saaxiib ah. Dm waxaad sidoo kale kula wadaagi kartaa sawirro, fiidiyow, xajiye, emoji oo ka mid ah waxyaabaha kale ee ay Instagram ku siiso.
Si aad u gasho farriimaha waa inaad gujisaa አዶ diyaaradda warqad oo ka muuqata xagga hoose ee sawirka ama fiidiyaha. Waxa kale oo aad ka heli kartaa midigta sare.
Bogagga Tooska ah ee 'Instagram Direct' waad ku hadli kartaa oo waxaad u diri kartaa waxaad rabto, waxaad si gaar ah qof ula hadli kartaa qof ahaan ama koox ahaan.
Instagram ka kombuutarka
Adigoo adeegsanaya PC-ga sidoo kale waad geli kartaa barta Instagram, laakiin waad u isticmaali kartaa oo keliya inaad u aragto oo aad cusboonaysiiso astaantaada, faallooyinka u bixiso oo aad siiso waxyaabo jecel.
Nooca ay soo bandhigtay shabakadan bulshada ee kumbuyuutarka ma aad geli kartid sawirro iyo muuqaallo. Aad ayey uga duwan tahay tan moobiilka laga bixiyo laakiin waxay leedahay howlo badan oo waxtar leh.
Instagram, sida shabakadaha kale ee bulshada, waxay leeyihiin istiraatijiyad algorithm ah oo ay tahay inaad ogaato haddii aad rabto inaad u isticmaasho qalabkan heer aqoonyahan ah. Algorithmku asal ahaan wuxuu ku saabsan yahay amarka sida daabacaada dadka aad raacayso u muuqdaan.
Nidaamka 'algorithm' ee Instagram wuxuu aad ula mid yahay kan Facebook. Si kale haddii loo dhigo, waxay tixgalineysaa astaamaha soo socda:
Waqtiga: Mudnaanta waxaa la siiyaa qoraalladii ugu dambeeyay. Dhammaantoodna laguma cayimin taariikhda laakiin kuwa ugu dambeeyay ayaa la tixgeliyaa.
Hawlgelinta: Ku jeceshahay iyo faallooyinka ayaa ah kuwo aad muhiim u ah in mudnaanta la siiyo waxyaabaha la soo qoro. Si kale haddii loo dhigo, inta aad leedihiin, waxa ay yeelanayaan awood baaxad leh. Farriimaha tooska ah ayaa sidoo kale la tixgeliyaa.
Taariikhda hore: Waxay ku saleysan tahay is dhexgalka iyo aragtida muuqaalka astaamaha daabacaadan.
Jidka sida Instagram u shaqeyso Waa mid aad u fudud. Cilmiga dabiiciga ah iyo cusubi ee ay soo bandhigtay shabakadan bulshada ayaa ka dhigaysa hab aan caadi ahayn oo ay dadku ku wada falgalaan.
Haddii aad rabto inaad Instagramkaagu sifiican u shaqeyso oo ay noqoto mid wax ku ool ah oo joogto ah waa inaad ahmiyad weyn siisaa waxyaabaha ay ka kooban tahay. Sidan ayaad u heli doontaa koror la hubo.
Adiguna, adigu ma ogtahay sida Instagram u shaqeyso?
1 Waa maxay Instagram?
2 Samee koontada Instagram
3 Bayoolaji Instagram
4 Kusoo dhexbiir sawir ama muuqaal fiidiyoow ah barta Instagram
5 La macaamil dadka kale
6 Hashtag on Instagram
7 Sheekooyinka Instagram
7.1 Ku dhajiyay Instagram
8 Instagram ka kombuutarka
9 Algorithm Instagram
Talooyinka ugu fiican ee ku saabsan: Sida loo duubay fiidiyoowga taleefankaaga moobaylka
Sidee loo baabi'iyaa koontada Instagram si ku meel gaar ah ama si joogto ah?